Koobii Biraayaant: Taphataan kubbaa kaachoo beekamaa Ameerikaa balaa helikooptaraan du'e - BBC News Afaan Oromoo
Koobii Biraayaant: Taphataan kubbaa kaachoo beekamaa Ameerikaa balaa helikooptaraan du'e
Intalli taphataa beekamaa Koobee Biraayaant namoota balaa helikooptaraan ajjeefaman sagal keessaa tokkodha. Balaan kun magaalaa Kaalaabaasaa Kaalifoorniyaatti mudate.
Biraayaant, helikooptarii dhuunfaa isaatii lafatti kufuun kan barbadaa'e.
Balaa kanarraa namni hafe tokkoyyuu hin jiru jedhameera.
Biraayaant, Waldaa Biyyaalessaa Kubbaa Kaachoo Ameerikaatti al shan shaampiyoonaa taheera. Bara hojii guutuu garee Loosaangelis Leekarsiif kan taphate yoo tahu, seenaa tapha kanaan maqaansaa guddaattti dhahama.
Taphattoonnii fi namooti beekamoo du'asaa tasaa erga dhagahaniin booda ergaa gaddaa dabarsaafii jiru.
Jila badhaasa Giiraamii Loos Anjileesitti istaadiyeemii Leekarsitti adeemsifamaa jiru irrattillee taphataan kun yaadatameera.
Gaggeessituun jilichaa Alishiyaa Kiis, 'gadda cimaa keessa jirra,'' jetteetti.
''Har'a Ameerikaa fi addunyaan goota jabaa dhabdee jirti. As mana Koobeen ijaare keessa laphee cabaadhaan dhaabata jirra,'' jetteetti.
Waldaa Biyyaalessaa Kubbaa Kaachoo(NBA)''du'a tasaa Koobee Biraayaant fi intala isa Giyaanaatiin gaddi guddaan nutti dhagahameera'' jedheera.
''Koobeen dandeettii fi kennamnii akkamiin inifannoof akka nama gahu ala digdama nutti agarsiiseera,'' jedheera.
Koobee Biriyaant waggaa digdamaaf garee Loos Anjiils Leekars waliin kan taphate yoo tahu bara 2016tti sooruma bahe.
Bara 2008tti taphataa filatamaa Waldaa Biyyaalessaa Kubbaa Kaachoo(NBA), yeroo lama taphataa filatamaa waldichaa taheera. Dabalataanis galii baayyee galchuun al lama shaampiyoonaa yoo tahu, ammas ala lama Olompikii irratti shaampiyoonaa taheera.
Bara 2006tti garee faallaa Tooroontoo Raaptoors irratti qabxii 81 galmeessisuun seenaa waldichaatiin qabxii guddaa lammaffaa tahee taa'eera.
Bara 2018tti immoo fiilmii daqiiqaa shaniin badhaasa noobeeli mo'ateera.
Biriyaantiifi haati warraa isaa Vaaneessaa ijoollee dubartootaa sadii qabu
Biryaant bara 2003tti miidhaa saalaa shamarree ganna 19 irratti qaqqabsiisuun kan himatamee yoo tahu boodarra garuu himattuun mana muriittii dhiyaattee ragaa bahuu dhiisuun dhimmicha akka hafu taheera. Ergasii Biraayaant waan isheef ana gidduutti uumame ani akkanatti hin ilaalle ture jechuun dhiifama gaafateera.
Goodayyaa suuraa Deegartoonni gareee kubbaa kaachoo leekars ergaa gaddaa dabarsaa jiru
Namni maal jedhe?
Du'asaan booda ergaan gaddaa baayyee yaa'aa jira. Hiriyaan isaa baroota dheeraaf waliin taphate Shaquulii O'Nee'aal, ''dhukkubbi akkamii keessa akkaan jiru ibsuu hin danda'u,'' jedheera.
Deeroon Wiiliyaams Biriyaant waliin Olompiikii kan mo'e yoo tahu,'' dorgomaa cimaa yomiyyuu ani waliin taphadhee.'' jedheera.
Taphataan kubbaa kaachoo duraanii Toonii Paarkar,''garaan na hammaate'' jedheera.
Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp,''oduu gaddisiisaa,'' jechuun barreessaniiru.
Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Baaraak Obaamaa ''goota dirree kubbaa kachoo,'' jechuun isa ibsaniiru.
Abbaan warqii Olompiikii Yuziyaan Boolt oduu du'aa isaa yoo dhagahu amanuun akka isa dhibe dubbateera.
Raappariin Keenye Weest,, ''jireenya jiraattuun nu dammaqsite,'' jedheeraanii.
Skip Instagram post by dwill8
Qabiinsa muslimoota Chaayinarratti yaada Ozil Kennee duuba hin jiru jedhe Arsenaal
15 Muddee 2019
Tilmaama tapha pirimerligii Ingiliz torban kanaa
'Diraamaan Abbaa Jaamboo dulluma keessa hirkoo naaf ta'uuf jira'
Dhaabbatni Apple koronaavaayirasiin na miidhe jedhe
Bilbilli loltoota Israa’eel ergaa warri Hamaas dubartoota fakkaatanii itti erganiin butame
Barseloonaan miidiyaa hawaasummaatiin Mesii miidhuusaa haale